Vaksinina Rosiana Sputnik V COVID-19 no nankatoavina hampiasana vonjy maika any Indonezia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Indonezia » Vaksinina Rosiana Sputnik V COVID-19 no nankatoavina hampiasana vonjy maika any Indonezia
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Penny Lukito, masoivohon'ny masoivoho nasionaly misahana ny ady amin'ny zava-mahadomelina sy sakafo
"Ny masoivohom-pirenena misahana ny zava-mahadomelina sy ara-tsakafo dia nanaiky vaksinin'ny coronavirus iray hafa, Sputnik V, ny talata 24 aogositra", hoy ny fanambarana navoaka androany tao amin'ny tranokalan'ny National Agency of Drug and Food Control.
Nanaiky ny vaksinin'ny coronavirus vita Rosiana i Indonezia.
Ny fandinihana lalina ny fanafody dia notanterahina.
Indonezia dia nandrakitra tranga maherin'ny 4,000,000 COVID-19.
Ny masoivoho nasionaly misahana ny zava-mahadomelina sy fihinanan-tsakafo any Indonezia dia nanambara tamin'ny Alarobia fa ny vaksinin'ny coronavirus Sputnik V vita Rosiana dia nekena hampiasaina vonjy maika ao amin'ny firenena.
"Ny masoivohom-pirenena misahana ny zava-mahadomelina sy ara-tsakafo dia nanaiky vaksinin'ny coronavirus iray hafa, Sputnik V, ny talata 24 aogositra", hoy ny fanambarana navoaka androany tao amin'ny tranonkalan'ilay firenena Sampan-draharaha nasionalin'ny fifehezana zava-mahadomelina sy sakafo Mivaky toy izao.
Ny lehiben'ny masoivoho Penny Lukito dia nilaza fa ny fandinihana lalina ny fanafody dia efa natao. Nanampy izy fa ny fahombiazan'ny Sputnik V dia niorina tamin'ny 91.6%.
Ny Rosiana Direct Investment Fund (RDIF) kosa dia nilaza fa i Indonezia no firenena faha-70 nanaiky Sputnik V. Ny totalin'ny firenena nanome alalana ny vaksinina Rosiana dia efatra miliara, izay mitentina 50% amin'ny mponina eran-tany.
"Indonezia no firenena be mponina indrindra any Azia ary ny fampidirana Sputnik V ao amin'ny portfolio vaksinim-pirenena dia hampiasaina amin'ny fampiasana vaksiny azo antoka sy mahomby indrindra eto an-tany," hoy ny CEO CEO RDIF.
Indonezia dia nandrakitra tranga maherin'ny efatra tapitrisa coronavirus, maherin'ny 128,000 ny maty ary 3.6 tapitrisa ny sitrana. Nanaiky ny fampiasana vaksinin'ny coronavirus novokarin'i Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna ary Pfizer ny tompon'andraikitra ao amin'ny firenena teo aloha.